8 Mgbe nke ahụ gasịrị, Chineke chetara+ Noa na anụ ọhịa ọ bụla na anụ ụlọ ọ bụla ya na ha nọ n’ụgbọ ahụ,+ Chineke wee mee ka ifufe fee n’elu ụwa, mmiri ahụ wee malite ịta.+ 2 Isi iyi nke ogbu mmiri+ na ọnụ ụzọ mmiri nke eluigwe+ wee kpọchie, e wee mee ka oké mmiri ozuzo ahụ nke si n’eluigwe kwụsị. 3 Mmiri ahụ wee malite ịta n’ụwa, o wee jiri nwayọọ nwayọọ na-atalata; mgbe otu narị ụbọchị na iri ise gasịrị, mmiri ahụ talatara.+ 4 N’ọnwa nke asaa, n’abalị iri na asaa n’ọnwa ahụ, ụgbọ+ ahụ kwụsịrị n’ugwu Ararat.+ 5 Mmiri ahụ wee jiri nwayọọ nwayọọ na-atalata ruo n’ọnwa nke iri. N’ọnwa nke iri, n’abalị mbụ n’ọnwa ahụ, a hụrụ elu ugwu dị iche iche.+ 6 O wee ruo na mgbe ụbọchị iri anọ gasịrị, Noa meghere windo+ nke ụgbọ ahụ ọ rụrụ. 7 E mesịa, o zipụrụ otu ugoloọma,+ o wee na-efegharị n’èzí, ya fere pụọ, ya efebata, ruo mgbe mmiri ahụ tara n’elu ụwa. 8 Mgbe e mesịrị, o si n’ebe ọ nọ zipụ otu nduru+ iji mata ma mmiri ahụ ọ taala n’elu ala. 9 Ma nduru ahụ ahụghị ebe ọ bụla ọ ga-ebere,* ya mere ọ lọghachikwutere ya n’ụgbọ ahụ n’ihi na mmiri ka dị n’elu ụwa dum.+ O wee wepụta aka ya nwụrụ ya nwụbata n’ime ụgbọ ahụ ọ nọ. 10 O wee chere ruo ụbọchị asaa ọzọ, o wee si n’ụgbọ ahụ zipụ nduru ahụ ọzọ. 11 E mesịa, nduru ahụ lọghachikwutere ya n’ihe dị ka n’oge mgbede, ma, lee! ọ kpụ akwụkwọ oliv+ ọ tụbitara ọhụrụ n’ọnụ ya, Noa wee mara na mmiri ahụ ataala n’elu ụwa.+ 12 O wee chere ruo ụbọchị asaa ọzọ. Mgbe ahụ, o zipụrụ nduru ahụ, ma ọ lọghachikwuteghị ya ọzọ.+ 13 O wee ruo na narị afọ nke isii na otu,+ n’ọnwa nke mbụ, n’abalị mbụ n’ọnwa ahụ, na mmiri ahụ tara n’elu ụwa; Noa wee wepụ ihe e ji kpuchie ụgbọ ahụ wee lepụ anya, ma, lee, elu ala agbakọọla.+ 14 N’ọnwa nke abụọ, n’abalị iri abụọ na asaa n’ọnwa ahụ, elu ụwa akọọla.+ 15 Chineke wee gwa Noa, sị: 16 “Si n’ụgbọ ahụ pụta, gị na nwunye gị na ụmụ gị na ndị nwunye ụmụ gị.+ 17 Mee ka ihe ọ bụla e kere eke nke dị ndụ n’ime ụdị anụ ahụ́ ọ bụla+ gị na ya nọ pụta, ma anụ ufe+ ma anụ ụlọ+ ma anụ niile ọzọ na-agagharị agagharị bụ́ ndị na-agagharị n’elu ụwa,+ ka ha wee na-enugharị n’ụwa wee mụọ ọmụmụ, baakwa ụba n’elu ụwa.”+ 18 Noa wee pụta, ya na ụmụ ya+ na nwunye ya na ndị nwunye ụmụ ya. 19 Ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ, anụ ọ bụla ọzọ na-agagharị agagharị na anụ ufe ọ bụla, ihe ọ bụla na-agagharị agagharị n’elu ụwa, ha pụtara n’ụgbọ ahụ n’ụdị ha dị iche iche.+ 20 Noa wee wuoro Jehova ebe ịchụàjà,+ werekwa ụfọdụ n’ime anụ niile dị ọcha+ nakwa ụfọdụ n’ime anụ ufe niile dị ọcha+ chụọ àjà nsure ọkụ n’elu ebe ịchụàjà ahụ.+ 21 Jehova wee nụ ísì ụtọ,+ Jehova wee sị n’obi ya:+ “Agaghị m akọcha ala ọzọ+ n’ihi mmadụ, n’ihi na ọchịchọ+ obi mmadụ jọrọ njọ malite n’oge ọ bụ nwata gawa;+ ọ dịghịkwa mgbe m ga-eti ihe niile dị ndụ ihe otiti dị nnọọ ka m mere.+ 22 Ruo ụbọchị niile ụwa ga-adịgide, ịgha mkpụrụ na iwe ihe ubi, na oyi na okpomọkụ, na ọkọchị na udu mmiri, na ehihie na abalị, agaghị akwụsị akwụsị ma ọlị.”+